SAADAASHA Charlie Nicholas Ee Kulamada Premier League Ee Badhtamaha Toddobaadkan & Saddex Kooxood Oo Waaweyn Oo Uu Ka Inkaarsaday - Gool24.Net
SAADAASHA Charlie Nicholas Ee Kulamada Premier League Ee Badhtamaha Toddobaadkan & Saddex Kooxood Oo Waaweyn Oo Uu Ka Inkaarsaday
Khabiirka kubadda cagta England iyo kanaalka Sky Sports ee Charlie Nicholas ayaa dhiibtay saadaashiisa toddobaadlaha ah ee horyaalka Premier League iyo waliba tobbanka kulan ee la ciyaarayo caawa, habeen dambe iyo habeen saddexaadka.
Kulamada adag ee la daawan doono ayuu hoggaaminayaa midka ay Arsenal caawa qaabilayso kooxda Leicester City, Chelsea ayaa booqanaysa Crystal Palace halka Man United ay martiyi doonto Aston Villa oo kaalmaha hoose ku jirta.
Aan ku bilawnee Charlie ayaa caawa in dhibco laga goyn doono u saadaaliyay kooxda booska afraad ku jirta ee Chelsea isaga oo aaminsan inay bar-bardhac lasoo geli doonaan Crystal Palace isla markaana uu dib u dhac ku iman doono hammigooda Champions League.
Charlie Nicholas ayaa wanaag kale u rajeeyay Arsenal oo beryahan dambe guusha deris la noqotay waxaana uu rajaynayaa inay kulan goolal badan kaga adkaan doonaan Leicester City.
Si lamid ah Gunners waxa uu guul u rajeeyay Manchester City oo dhawaan guuldarro lama filaan ah kala soo kulantay Southampton waxaana uu aaminsan yahay inay cadhada kala dul dhici doonaan Newcastle United.
Charlie ayaa guul kale u saadaaliyay kooxda kusoo guuleysatay horyaalka ee Liverpool, Reds oo dhawaan guul kasoo gaadhay Aston Villa ayuu aaminsan yahay inay markale saddexda dhibcood Amex Stadium kaga soo qaadan doonaan Brighton.
Guuldarro lama filaan ah ayuu u rajaynayaa habeenka Khamiista kooxda Tottenham oo boqan doonta AFC Bournemouth oo booska 19-aad ee miiska kala sarreynta fadhida isla markaana sagaal gool laga soo dhaliyay labadii kulan ee ugu dambeeyay.
Nicholas oo aad moodo inuu usbuucan ka inkaarsanayo kooxaha waaweyn ayaa xataa inay dhibco lumin doonaan u saadaaliyay Man United oo dhawaanahan la celin la’aa waxaana uu qabaa inay Aston Villa lasoo bar-barayn doonaan.